“माता लक्ष्मीको दर्शन गरी मंसिर १ गते/नोभेम्वर १६ “सोमबार” तपाइको भाग्य कस्तो छ राशिफल हेर्नुहोस् “ – Krazy NepaL
November 15, 2020 340
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल मंसिर १ गते सोमबार ई. सं. २०२० नोभेम्वर १६ नेपाल सम्बत ११४१ कछलाथ्व पा’रु , प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा , चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा, अनुराधा नक्षत्र, अतिगंड ‘योग, बव करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः२६ बजे, सूर्या’स्त साँझ ५ः१२ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको वृश्चिक राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण का’र्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा आफ्नो पुरा शरिर ऐना’मा हेरेर ‘जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल ‘प्राप्त हुनेछ । आज भा”इटिका, गोवर्धन पुजा तथा’ नेपाल सम्बत ११४१ प्रारम्भ परेको छ । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा नि”स्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ६ बजरे २६ मिनेट देखि ७ बजेर ४७ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउने हुदा खानपान तथा बाहिरि वाताबरणको ख्याल गर्नुहोला। समाजसेवामा समय खर्चने हरुले जनताको आलोचना सहितको समर्थन प्राप्त हुनेछ। आफन्त तथा ईष्टमित्र तथा अग्रज सँग टाडिएर कहिकतै जानु पर्दा मन खिन्न हुनेछ। व्यापार व्यावसायमा आम्दानि भएपनि बचाउन मुस्किल पर्नेछ।
दाजुभाई तथा साझेदारहरु सँग मिलेर गरिने पेशा व्यावसायबाट भनेजस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ। लेखन कला तथा साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउँनेहरुले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सक्नेछन्। माया प्रेमको गाठो कसिलो भएर जानेछ भने घर परिवारमा सबैको सहयोग पाईन हुनाले नया काम गर्ने अवसर आउनेछ। पढाई लेखाईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिने तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन्।
पढाई लेखाईमा थोरै समय दिदा पनि उत्कृष्ट’ नतिजा आउने हु”नाले आफन्त तथा गुरुजनहरु ”खुसि हुनेछन्। तपाईको ईमान्दारिताको सबैले कदर गर्नेछन् भने सामाजिक कामहरु समयमा सम्पन्न हुने हुनाले मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ। आुफन्त तथा कुटम्बसँगको चिसिएको सम्बन्धमा सुधार भएर जाने समय रहेकोछ।
राम्रा पहिरनले अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ। नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आफुलाई अब्बल साबित गर्न सकिनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताब आउनेछ भने न”या प्रकृतिको काम थालनि गरि मनग्गे आम्दा’नि गर्न सकिनेछ। परिवारका साथ मिष्टान्न भोजनका साथ समय व्यातित गर्न सकिनेछ। धर्म तथा यस्तै कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर जुर्नेछ।
खर्च अभावले हातमा आईसकेको काम रोकिनेछ भने व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउनाले खल्ति रित्तिनेछ। आफन्त तथा अग्रजहरु सँग सानो सानो बिषयमा बिवाद सिर्जना हुने योग रहेकोछ। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने तथा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ ख्याल गर्नुहोला। समस्या पर्दा सहयोग गर्नेहरु कमै भेटिनेछन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएजस्तो हुनेछ भने व्यापारमा समय दिन नसस्दा घाटा लाग्ने योग रहेकोछ।
व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ ‘भने सानो प्रयत्नले ठुलो’ काम बन्ने तथा थोरै लगानि गर्दापनि प्रशस्त आम्दानि हुने समय रहेकोछ’। सहयोगहिरु जुट्नाले रोकिएको काम सहजै सम्पादन हुनेछन्। दाजुभाई तथा अग्रजहरुको हरेक क्षेत्रमा साथ रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ। बिषेश समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ रमाउन’ सकिनेछ।
नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा बढोत्तरीको गतिलो सम्भावना रहेकोछ। स्रोत साधन जुट्नाले व्यापार व्यावसायमा सोचेभन्दा बढिनै आम्दानि ‘हुनेछ। माया प्रेमको गाठो ‘कसिलो हुनुको साथै जीवन’ साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ।
लगनशिल तथा मेहनेतले चाहेको उपलब्धि हासिल हुँनेछ। परिवारका साथ लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रवल सम्भावना रहेकोछ। ‘खोज तथा अनुशन्धानमा समय ल”गानि गर्नेहरुले राम्रो नतिजा हात पार्न सक्ने योग ”रहेकोछ। पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा सुधार भएर जानेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा आउने प्रतिष्पर्धिहरुलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। माया प्रेममा एक अकासँग नजिक हुने समय रहेकोछ।
समयको ख्याल नगरि काम गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ ध्या’न दिनुहोला। पुराना समस्या ‘बल्झने तथा ‘नयाँ स’मस्याहरु आउँने हुँदा ‘काम गर्न अस’जिलो हुनेछ। दैनिक खर्च बढ्नेछ भने घर परिवारका आवस्यक्ता परिपुर्ति गर्न सकिने अवस्था रहने छैन। व्यापार व्यावसायमा बढि’नै समय खर्चिय मात्र नाफा कमाउँन सकिनेछ।
समयमा कामह’रु सकिने हुँदा अन्य क्षेत्र”मा पनि हात हाल्ने तथा लगानि गर्ने बाताबरण बनाउन सकिनेछ। व्यापार व्यावसायमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ भने व्यापारकै शिलशिलामा देश बिदेशको यात्रा गर्न सकि’नेछ। मन परे’को मानिस तथा जीवन साथिको सहयोगले उपलब्धिमुलक कामहरु सम्पादन गर्न सकिने हुँदा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँने समय रहेकोछ।
समाजमा आफ्नो खुबि प्रयोग गरि नाम कमाउन ‘सकिनेछ। बिवाद तथा प्रतिष्प’र्धामा अरुलाई उछिन्दै त’पाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ। अदालति निर्ण’यहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् भने शत्रुहरु आफै किनारा लाग्नेछन्। व्यापार व्यावासायमा लगनशिल तथा ईमान्दारिताका साथ लाग्नाले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ।’ व्यापारकै शिलशिलामा लामो दुरि’यो यात्रा गर्न सकिनेछ।
आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँन सकिनेछ भने तपाईको का”र्य शैलिको सबैले समर्थन गर्ने’छन्। बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गति’लो प्रश्तुति पस्कने अवसर ‘प्रा’प्त हुनेछ। परिवार तथा सन्तान’ बाट त’पाईले गरेको का’ममा उल्लेख्य सहयोग पाईनेछ। प्रेम प्रशङमा रमाईलो गर्दै समय ब्यातित गर्न सकिनेछ भने नयाँ ठाउँबाट प्रेम प्रस्ताब आउँन सक्छ।
Prev“‘इन्स्टा’ग्रामका मा’लिक ’ ड्यान बिल्जारि’यन जु’वा र मोज’मस्तीले टाट पल्टिदै “
Next“एक्लै रुम’ मा ‘हुदा युवतिहरु यस्तो’ सम्म गर्ने रहेछ (हेर्नुहोस भिडियो)”
“‘बालुवा’टार’को ५० बिघा जग्गा ह’डप्ने फरार नेकपा’का ने’ता रेव’त राज पु’री पक्राउ”
प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाले कक्षाकोठा भित्र गर्यो अश्लिल क्रियाकलाप भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित)
भाउजु लिएर देवर भागे,कारण थाहा पाउदा सबै चकित !
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (16608)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (13335)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (11275)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (11067)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (10499)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (10405)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (9952)
महिनावारी अघि नै थाहा पाउन सकिन्छ गर्भ रहेको, यस्ता लक्षण देखिए रहनुहोस् सावधान ! (9746)
३ दिनमा नै पुरानो दादलाई चैट पार्ने चमत्कारिक घरेलु औषधीको बारेमा पद्नुस (8952)
“खुसिको खबर :सुनको भाउ फेरी ओरालो लाग्यो सुन किन्नेको भिड “ (8551)
भोली आमाको मुख हेर्ने औशी २८ बैशाख २०७८ मङ्गलबारको राशिफल निकै राम्रो छ हेर्नुहोस्